मे 28, 2019 मे 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments निन्द्रा
जब हामी मस्त निदाउन सक्दैनौं, जब हाम्रो निन्द्रा बिथोलिन्छ त्यही नै अनिन्द्रा हो । निन्द्रा पुरा नहुँदा शरीरलाई आरम मिल्नदैन । यसको नकारात्मक असर हाम्रो स्वास्थ्य र मस्तिष्कमा पर्छ । पर्याप्त निन्द्रा लिन नपाएमा हामीभित्र मानसिक तथा शारीरिक बिकारले डेरा जमाउँछ । अनिन्द्राले रोग निम्त्याउँछ । जब राम्ररी निन्द्रा पर्दैन, हाम्रो शरीर भद्दा हुन्छ । काम गर्न जाँगर चल्दैन ।
मस्त सुत्न नसक्नु वा गहिरो निन्द्रा लिन नसक्नु आफैमा शारीरिक तथा मानसिक जटिलता हो । यसले थप रोग निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ । एक रातमा कति समय निदाउने ? यसको जबाफ उमेर अनुसार केहि फरक हुन्छ । खासगरी बच्चाले अधिक समय सुत्नुपर्ने हुन्छ, तुलनात्मक रुपमा बयस्कले कम । अक्सर किशोर-किशोरी, युवा, बयस्क, बृद्धबृद्धाले औसत सातदेखि आठ घण्टा सुत्नुपर्ने बताइन्छ । यद्यपी सुत्ने अवधीले मात्र हुँदैन, त्यो कति गहिरो र मस्त थियो भन्ने कुरा मूख्य हो । निन्द्रा नलाग्ने कारणहरु निम्न अनुसार छन् ।
निन्द्रा नलाग्ने कारणहरु
१. धेरैजसो मानसिक कारणले निन्द्रा विथोलिन्छ । मनमा कुरा खेलाउने बानीले निन्द्र पर्दैन ।
२. धेरै सोच्ने, मनमै तर्क वितर्क गर्ने, कुण्ठा, गुनासा, आवेग जस्ता मानसिक विकारले निन्द्रा बिथोलिन्छ ।
३. शारीरिक समस्याले पनि निन्द्रा लाग्दैन । कमजोरी वा कुनै पीडाको कारण मस्त सुत्न सकिदैन ।
४. धेरै उत्साहित हुँदा, धेरै थाकेको बेला पनि निन्द्रा लाग्दैन, यद्यपी यी क्षणिक समस्या हुन् ।
← घुम्न कतै जान लाग्दा सुटकेसमा सामान अटेन, यसो गर्नुहोस्
के भक्तिभावले शक्ति प्राप्त हुन सक्छ ? →
मार्च 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
जनवरी 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
जुन 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
2 thoughts on “निन्द्रा किन लाग्दैन ?”